Ọrụ Ndịozi 16 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọrụ Ndịozi 16:1-40
16 O wee bịarute na Dabe nakwa na Listra.+ Ma, lee! otu onye na-eso ụzọ Jizọs aha ya bụ Timoti+ nọ n’ebe ahụ, bụ́ nwa nke otu nwaanyị Juu kwere ekwe, ma nna ya bụ onye Grik,
2 ụmụnna nọ na Listra na Aịkoniọm kọkwara akụkọ ọma banyere ya.
3 Pọl kwuru na ya chọrọ ka nwoke a soro ya gawa, o wee kpọrọ ya ma bie ya úgwù+ n’ihi ndị Juu nọ n’ebe ndị ahụ, n’ihi na mmadụ niile maara na nna ya bụ onye Grik.
4 Ma mgbe ha na-agafe obodo dị iche iche, ha na-enye ndị nọ n’ebe ahụ iwu ndịozi na ndị okenye nọ na Jeruselem kpebiri ka ha debe.+
5 Ya mere, n’ezie, a nọgidere na-eme ka ọgbakọ dị iche iche dị ike n’okwukwe,+ ha na-amụbakwa n’ọnụ ọgụgụ site n’ụbọchị ruo n’ụbọchị.
6 Ha gafekwaara Frijia na obodo Galeshia,+ n’ihi na mmụọ nsọ machibidoro ha iwu ikwu okwu Chineke n’ógbè Eshia.
7 Mgbe ha nọkwa na-eru Mishia, ha gbalịrị ịbanye Bitinia,+ ma mmụọ Jizọs ekweghị ha.
8 Ya mere, ha gafeere Mishia gbadata Troas.+
9 N’abalị, Pọl hụrụ otu ọhụụ:+ otu nwoke Masedonia guzo na-arịọsi ya arịrịọ ike, sị: “Gafeta na Masedonia nyere anyị aka.”
10 Ma ozugbo ọ hụrụ ọhụụ ahụ, anyị gbalịrị ịbanye Masedonia,+ n’ihi na anyị matara na Chineke akpọwo anyị ka anyị zisaara ha ozi ọma.
11 N’ihi ya, anyị banyere n’ụgbọ mmiri na Troas wee gawa Samọtres. Anyị akwụsịghị akwụsị. Ma n’echi ya, anyị gara Niapọlis.
12 Anyị sikwa n’ebe ahụ gaa Filipaị,+ bụ́ ógbè Rom na-achị, nke bụ́ obodo bụ́ isi n’ógbè Masedonia.+ Anyị nọrọ n’obodo a ruo ụbọchị ụfọdụ.
13 N’ụbọchị izu ike, anyị gakwara n’azụ ọnụ ụzọ ámá dị n’akụkụ osimiri, bụ́ ebe anyị chere na e nwere ebe a na-ekpe ekpere; anyị wee nọdụ ala, malite ịgwa ndị inyom gbakọrọ ebe ahụ okwu.
14 Otu nwaanyị aha ya bụ Lidia, onye na-ere ákwà na-acha odo odo, onye obodo Tayataịra,+ onye na-efekwa Chineke, nọkwa na-ege ntị. Jehova wee meghee nnọọ obi+ ya ịnabata ihe Pọl nọ na-ekwu.
15 Ma mgbe e mesịrị ya na ezinụlọ ya baptizim,+ ọ rịọrọ arịrịọ, sị: “Ọ bụrụ na unu ewerewo m dị ka onye kwesịrị ntụkwasị obi n’ebe Jehova nọ, batanụ n’ụlọ m nọrọ.”+ O wee mee nnọọ ka anyị bịa.+
16 O wee daba na ka anyị nọ na-eje n’ebe a na-ekpe ekpere, otu nwa agbọghọ na-eje ozi, onye nwere otu mmụọ,+ bụ́ mmụọ ọjọọ nke a na-ajụta ase,+ zutere anyị. Ọ na-ewetara ndị nna ya ukwu uru dị ukwuu+ site n’ịkọ ọdịnihu.
17 Nwa agbọghọ a nọgidere na-eso anyị na Pọl ma na-eti mkpu,+ sị: “Ndị a bụ ndị ohu nke Chineke Onye Kasị Elu, bụ́ ndị na-ekwusara unu ụzọ nzọpụta.”
18 Ọ nọgidere na-eme nke a ruo ọtụtụ ụbọchị. N’ikpeazụ, ike ya gwụrụ Pọl,+ o wee tụgharịa gwa mmụọ ahụ, sị: “Ana m enye gị iwu n’aha Jizọs Kraịst ka i si n’ime ya pụta.”+ O wee pụta n’otu oge awa ahụ.+
19 Ma mgbe ndị nna ya ukwu hụrụ na ha enwekwaghị olileanya inweta uru,+ ha jidere Pọl na Saịlas ma dọkpụrụ ha baa n’ọma ahịa gakwuru ndị na-achị achị.+
20 Ha dugara ha n’ihu ndị nduzi obodo, wee sị: “Ndị a na-enye obodo anyị nsogbu+ nke ukwuu, ebe ha bụ ndị Juu.
21 Ha na-ekwusakwa omenala+ ndị iwu na-akwadoghị ka anyị nabata ma ọ bụ na-eme, ebe anyị bụ ndị Rom.”
22 Ìgwè mmadụ ahụ bilikọkwara megide ha; ndị nduzi obodo ahụkwa, mgbe ha dọkapụsịrị uwe elu ha yi, ha nyere iwu ka a pịa ha ụtarị.+
23 Mgbe ha tisịrị ha ihe nke ukwuu,+ ha tụbara ha n’ụlọ mkpọrọ, nye onye na-elekọta ụlọ mkpọrọ iwu ka o chee ha nche nke ọma.+
24 Ebe e nyere ya iwu dị otú ahụ, ọ tụbara ha n’ụlọ mkpọrọ dị n’ime ime+ ma kpọchisie ụkwụ ha ike n’ọtọsị.+
25 Ma n’ihe dị ka n’etiti abalị,+ Pọl na Saịlas nọ na-ekpe ekpere ma jiri abụ na-eto Chineke;+ ee, ndị mkpọrọ nọ na-anụ olu ha.
26 Na mberede, oké ala ọma jijiji mere, ntọala ụlọ nga ahụ wee maa jijiji. Ibo ụzọ niile meghekwara n’otu ntabi anya, agbụ e kere ha niile tọpụkwara.+
27 Mgbe onye ahụ na-elekọta ụlọ nga tetara n’ụra wee hụ na ọnụ ụzọ ụlọ mkpọrọ ahụ meghechara emeghe, ọ mịịrị mma agha ya ma chọọ igbu onwe ya,+ n’ihi na o chere na ndị mkpọrọ ahụ agbapụwo.+
28 Ma Pọl tiri mkpu n’oké olu, sị: “Emerụla onwe gị ahụ́,+ n’ihi na anyị niile nọ n’ebe a!”
29 Ya mere, ọ sịrị ka e weta ọkụ, o wee mabata n’ime, ọ maara jijiji daa n’ala+ n’ihu Pọl na Saịlas.
30 O wee kpọpụta ha èzí, sị: “Ndị nwe m, gịnị ka m ga-eme+ ka e wee zọpụta m?”
31 Ha wee sị: “Kwere n’Onyenwe anyị Jizọs, a ga-azọpụtakwa gị,+ gị na ezinụlọ gị.”+
32 Ha wee gwa ya okwu Jehova, ya na ndị niile nọ n’ụlọ ya.+
33 Ọ kpọkwaara ha n’oge awa ahụ n’abalị ma saa ọnyá ha; e mekwara ha niile baptizim, ya na ndị ezinụlọ ya,+ n’egbughị oge.
34 O wee kpọbata ha n’ụlọ ya ma kwadebe tebụl nri n’ihu ha, ọ ṅụrịkwara ọṅụ dị ukwuu, ya na ezinụlọ ya dum, ugbu a o kwerewooro na Chineke.
35 Mgbe chi bọrọ, ndị nduzi obodo zipụrụ ndị uwe ojii ụlọikpe+ ka ha gaa sị ya: “Hapụ ndị ahụ.”
36 Ya mere, onye ahụ na-elekọta ụlọ mkpọrọ kọọrọ Pọl ihe ha kwuru, sị: “Ndị nduzi obodo ezitewo ndị mmadụ ka a tọhapụ unu abụọ. Ya mere, ugbu a, pụtanụ gawara onwe unu n’udo.”
37 Ma Pọl sịrị ha: “Ha pịara anyị ihe n’ihu ọha n’amaghị anyị ikpe, anyị bụ́ ndị Rom,+ tụbakwa anyị n’ụlọ mkpọrọ; hà na-achụpụkwa anyị na nzuzo ugbu a? Ọ dịghị ma ọlị! kama ha bịa n’onwe ha kpọpụta anyị.”
38 Ya mere, ndị uwe ojii ụlọikpe ahụ kọọrọ ndị nduzi obodo okwu ndị a. Ndị a tụrụ egwu mgbe ha nụrụ na ndị ahụ bụ ndị Rom.+
39 N’ihi ya, ha bịara ma rịọsie ha arịrịọ ike, mgbe ha kpọpụtasịrị ha, ha gwara ha ka ha si n’obodo ahụ pụọ.
40 Ma ha si n’ụlọ mkpọrọ ahụ pụta ma gaa n’ụlọ Lidia, mgbe ha hụkwara ụmụnna, ha gbara ha ume+ wee pụọ.
Ọrụ Ndịozi 16